Iindaba -Kunyaka ophelileyo, i-11.0 ye-GWH yeebhetri ze-lithium zehlabathi zithunyelwe, i-80% yazo yasetyenziswa kwimizi mveliso yase China
Kunyaka ophelileyo, i-11.0 GWH yebhetri yelitiyamu yezixhobo zamandla yathunyelwa, i-80% yayo yasetyenziswa kwimizi-mveliso yaseTshayina
Ibhetri yeLithium iye yafumana ukutshintshwa kwebhetri ye-nickel cadmium kunye ne-nickel hydrogen ibhetri. Ukusuka kwimbono yesikali sentengiso, isikali sentengiso sehlabathi se-lithium ibhetri yezixhobo zamandla ziya kufikelela kwi-9.310 yezigidigidi ze-yuan ngo-2019, kwaye isikali sentengiso se-lithium yebhetri yezixhobo zamandla e-China ziya kufikelela kwi-7.488 yezigidigidi ze-yuan.
Kutshanje, i-evtank, iziko lophando, ngokudibeneyo likhuphe iphepha elimhlophe kuphuhliso lweshishini lezixhobo zamandla eTshayina (2020) ngokudibeneyo neIvey Economic Institute. Kwiphepha elimhlophe, i-evtank yenze uphando oluneenkcukacha kunye noHlahlelo kumthamo wokuhambisa impahla, isikali sentengiso, ukhuphiswano lweendlela zamashishini ezinto zamandla, imeko yokuthumela ngaphandle kwamashishini ezixhobo zombane, kunye neemeko zebhetri yezixhobo zombane, kwaye zenza uphando oluneenkcukacha kunye noHlahlelo iimveliso eziphambili zasekhaya Uhlalutyo lokulinganisa lweshishini lwezixhobo zombane lwenziwa.
Ngokwamaphepha amhlophe akhutshwe liZiko loPhando lwezoQoqosho i-Ivey, ngokuphuhliswa kwezixhobo zamandla ezingenantambo, inani leeseli ezifunekayo kwisixhobo esinye sombane nalo liyanda, kwaye ukuthunyelwa kweebhetri zelithium zezixhobo zombane bekhula ngokukhawuleza. Kwi-2019, ukuthunyelwa kwebhetri yebhetri yezixhobo zamandla kuya kufikelela kwi-11.0gwh, ngokukhula konyaka kwi-25.0%, kunye nemfuno yebhetri ye-lithium kwimakethi yezixhobo zamandla e-China yi-8.8gwh, unyaka nonyaka ukwanda kwama-25.7%.
Ngokwamaphepha amhlophe, iibhetri ze-lithium ziye zafumana ukutshintshwa kweebhetri ze-nickel cadmium kunye neebhetri ze-nickel hydrogen. Ngokomgangatho wentengiso, isikali sentengiso sehlabathi seebhetri zeelithium zezixhobo zombane ziya kufikelela kwi-9.310 yezigidigidi ze-yuan kwi-2019, kunye nenqanaba lentengiso leebhetri ze-lithium zezixhobo zombane e-China ziya kufikelela kwi-7.488 yezigidigidi ze-yuan.
U-Wu Hui, umphathi jikelele weSebe loPhando lwe-Ivey yoPhando lwezoQoqosho, uthe iibhetri ze-lithium zezixhobo zamandla zifuna ukusebenza kwezinga, ngenxa yoko umda wabo uphezulu kuneebhetri zohlobo lwamandla. Ixesha elide, iibhetri zezixhobo zamandla emhlabeni bezihlala nge-Samsung SDI, Panasonic, Murata, LG kunye nezinye iinkampani zebhetri zaseJapan nezaseMzantsi Korea. Nangona kunjalo, kwiminyaka yakutshanje, amashishini amaTshayina anje ngeYiwei lithium energy, iTianpeng, haisida kunye namanye amashishini aqale ukuba maninzi Isabelo sentengiso samashishini ebhetri asekhaya kwinqanaba eliphezulu leetriyithi yezixhobo zamandla kwihlabathi liyanda ngokuthe chu.
UWu Hui uthe okwangoku, iibhetri eziphambili zezixhobo zombane zi-cylindrical 1.5Ah kunye ne-2.0ah. Iinkampani zebhetri zaphesheya sele zibonelele ngeebhetri zezixhobo ze-2.5ah ngesixa esikhulu. Iinkampani zebhetri zaseTshayina ezinje ngeYiwei lithium energy nazo ziya kubonelela ngeebhetri eziyi-2.5ah ngo-2020. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-ATL kunye namanye amashishini ebhetri ethambileyo nawo azama ukusebenzisa iiseli zephakeji ezithambileyo kwicandelo lezixhobo zamandla.
Kwiphepha elimhlophe kuphuhliso lweshishini lesixhobo sombane saseTshayina (2020), iZiko loPhando lwezoQoqo lenze uhlalutyo olunzulu malunga neempawu ezisisiseko kunye netyathanga lezemveliso lwezixhobo zombane, umthamo wothutho lwehlabathi kunye nomgangatho wentengiso weentlobo ezahlukeneyo zezixhobo zombane, Iintlobo ezahlukeneyo zamandla eTshayina ukuthunyelwa kunye nobungakanani bemakethi, iipateni zokhuphiswano lweshishini kunye neshishini lombane wesixhobo sombane, kunye nemeko yokuthumela kwelinye ilizwe kunye nemeko yokuthumela kwelinye ilizwe kwishishini lesixhobo sombane Isixa sokuthumela kunye nemimandla, iimveliso kunye nemeko yeshishini yesixhobo samandla esiphambili amashishini, kunye nemeko yeshishini lezixhobo eziphambili zabanikezeli bebhetri zihlalutywa ngokweenkcukacha, kwaye ishishini lesixhobo samandla kule minyaka mihlanu izayo lihlalutywa kwaye liqikelelwe.
Ibhetri ye-12v yeLithium Ion enokutsha, Ngo-18650 uNimh, Li Ibhetri, Ipakethe yeLithium yebhetri eyi-12 yeVolthi, ILithium Ion Polymer Ibhetri, 3.7 Ibhetri egcwalisekayo, Zonke iiMveliso